Iindiza zeePhepha -Ikkaro
yokuqalisa >> Imvelaphi kunye nemvelaphi >> Iiplani zePhepha
Icandelo oza kuthetha ngalo Iiplani zephepha. Ukwakhiwa, iifom zokuhamba ngenqwelomoya, amakhonkco, izicwangciso, njl.
Ukusukela sibancinci batsalela ingqalelo yethu. sithatha iphepha siyalisonga ngezandla zethu kwaye ngesiquphe iye yaba yinqwelo-moya kwaneZIMBANE! Akukho nto isebenzayo kwaye iyasebenza kwi-origami yokuqaqambisa umntwana.
Saqala ngeemodeli zakudala, ezo sonke siyaziyo ukuba zenziwa njani kwaye kungekudala sifuna ngaphezulu, kwaye saqala ukukhangela iintlobo ezahlukeneyo zeenqwelo moya, ezona zibhabha kakhulu, ezikhawulezayo ukuzenza, njl. njl.
Kwaye kweli candelo ndiza kuthetha ngazo zonke ezi nqwelomoya, ukusuka apho enye ibhabha kwezona zilungileyo, ukuya kwezona zibhabhayo. indlela yokwenza iinqwelomoya inyathelo ngenyathelo kunye neminye imibuzo enomdla enxulumene nehlabathi le-Origami kunye nokwenza iimodeli zephepha lenqwelomoya. Ngaba uyazi ukuba kukho izinto ezilinganisa inqwelomoya? Kuthekani ngokhuphiswano lwexesha lokubaleka? Yintoni oomatshini abenza iinqwelomoya ngokwabo kwaye bazazise? Ngaba ungathanda ukuzakhela eyakho isiqalisi senqwelomoya?
Ewe, yile nto ndiyenzayo. Naziphi na izimvo onazo zamkelekile.
Ndikushiya neetutorials zokwenza iIplane zePhepha. Kwaye ukuba ungumthandi wemvelaphi ye-origami icandelo lethu
Iirekhodi zehlabathi ezinenqwelomoya yamaphepha
Sishiya iividiyo ezimbini ezinerekhodi zehlabathi ezineenqwelo moya zephepha kulo nyaka.
Kwelinye icala sinobuchwephesha obude, nemizuzwana engama-27,9.
Kwaye kwelinye icala, ukhuphiswano olunomdla endingazange ndilubone ngaphambili. Irekhodi lehlabathi leenqwelomoya zamaphepha abhabha ebotshelelwe kwityhubhu. Ndifuna ukwazi ngokwenene, andazi ukuba umgama ofanele ukubeka ityhubhu xa ufuna ukuziqhelanisa nokuzazisa, kodwa ndiza kuphanda.
Ndifuna ngokwenene ityhubhu, kufuneka ndiyizame le, hehehe
Konke oku sikubonile ngaphakathi Oriplane
I-DC-03 lelona phetshana liphezulu ehlabathini
Sinikezela ISicwangciso sePhepha DC-03 ithathelwe ingqalelo Yeyona ndege indiza emhlabeni.
Kodwa ke, njengeyona intle, eyona imbi kakhulu okanye elungileyo isisihlobo, kuxhomekeke kwinjongo esiyilandelayo, ndiyathanda ukuthi i-glider efanelekileyo yephepha kwihlabathi. Ewe, kule ntsimi kubonakala ngathi akukho mntu ubangisana naye.